Waa kuwan afarta meelood ee baaritaanka NASA ee asteroid ay ku degi karto - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Waa kuwan afarta meelood ee baaritaanka NASA ee baaritaanka asteroid uu ku degi karo - BGR
Waa kuwan afarta meelood ee baaritaanka NASA ee baaritaanka asteroid uu ku degi karo - BGR
Hawada NASA ee OSIRIS-REx ayaa hada ku raad joogta agagaarka asteroidka loo yaqaan Bennu. Waa bilo, sawirro laga qaadayo iyo tirtiridda dusha sare ee asteroid-ka si loo helo fikrad wanaagsan oo ku saabsan halista ay baaritaanku wajihi karo marka ugu dambeyntii dhulka ku dhufato.
Hadda, ka dib markii la baaro muraayad kasta oo labajibbaaran oo dhagaxan weyn ah, NASA ayaa cidhiidhi gashay goobihii laga soo degi lahaa illaa afar murashax oo keliya . Mid kasta oo ka mid ah afarta dhibco waa mid soo jiidasho leh, oo leh qashin burburin ballaaran, laakiin kooxda sayniska ayaa wali leh shaqo ay ku qabtaan ka hor inta aysan samayn wicitaanka ugu dambeeya.
Markii howlgalka la bilaabay markii ugu horeysay, NASA wuxuu mooday in arrimuhu si wanaagsan u socdaan. si ay uga dhakhso badan sidii hore. Markii ay baaritaanku soo gaadhay Bennu, waxay ogaatay in asteroidku runtii "aad u badan" ka badan yihiin sida la qiyaasayo, iyadoo qashinka ku faafay dusha oo dhan. Tani waxay carqaladeysay raadinta goob xiriir oo habboon.
Hadafka ugu dambeeya ayaa had iyo jeer ahaa inuu soo celiyo samballada astaamaha asteroid-ka oo dib loogu celiyo Dunida. Way adag tahay in la xusho meesha laga qaadayo muunadan sabab la xiriirta shuruudaha nidaamka muunad ururinta hawada sare. Maaddadu waa inay ka yaraataa hal inji, haddii kale baaritaanka ma awoodo inuu qabto, laakiin afarta goobood ee soo caga-dhigashada ayaa u muuqda inay soo bandhigayaan shey ku habboon.
"Waxaan ogeyn in Bennu uu naga yaabin doono, marka waxaan diyaar u nahay wax kasta oo aan ka heli karno," ayuu madaxa baaraha OSIRIS-REx Dante Lauretta ku yiri hadal uu soo saaray. "Sida hawlgal kastoo sahamin ah, wax ka qabashada waxa aan la aqoon waxay u baahan tahay dabacsanaan, ilo iyo xariir. Kooxda OSIRIS-REx waxay soo bandhigeen astaamahan aasaasiga ah si looga gudbo waxa lama filaanka ah intii lagu jiray kulanka Bennu. "
Laga soo bilaabo halkaas, kooxdu waxay ku soo koobi doontaa xulashooyinka labo, ka dibna u duuli doonaan goobta si ay u doortaan goobta saamiga laga qaadayo. . Dhaqdhaqaaqaani ma dhici doono ilaa sanadka dambe, duulimaadka dib ugu laabashada Earth wuxuu qaadan doonaa seddex sano oo kale, sidaa darteed ma heli doonno wax Bennu asteroid wax yar ka hor dhamaadka sanadka 2023.
Soo-saare Nuclear oo u qalma NASA wuxuu diyaar u noqon karaa inuu duulo 2022 - BGR
Waxaan si dhakhso ah u ogaan karnaa haddii Dunida-sida adduunyada kale loo abaabulayo TRAPPIST-1 ay taageeri karto nolosha - BGR